Maanta waa sanadguuradii sadexaad ee Somaliska | Somaliska
Sadex sano ayaa ka soo wareegtay maalintii aan aasasay boggaan Somaliska.com oo noqday mid indhaha u fura Soomaali badan oo ku nool Sweden. Sababta ka dambeysay abuurista Somaliska ayaa ahayd in aan dareemay baahida ay Soomaalida Sweden u qabaan in ay helaan goob ay kala socdaan dhacdooyinka wadanka isla markaana ay ku wada xiriiraan.
Ujeedadii loo abuuray Somaliska ayaan ku faraxsanahay in la gaaray iyadoo maanta ay Soomaalida Sweden ku nool 80% akhristaan boggaan. Waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee Somaliska uu qoray ayaa waxaa ka mid ahaa arimaha la xiriira mideynta qoysaska Soomaalida oo aan dadaal dheer u galnay. Arintaas ayaa inta badan lagu guuleystay inkastoo ay wali jiraan xayiraado. Waxaan sidoo kale si firfircoon u soo bandhignay cunsuriyada lagu hayo Muslimiinta Sweden iyo dagaalka lagula jiro Islaamka.
Waxaan dhaliilo u soo jeediyay caadooyinka Somalida oo aan isku dayay marar badan in aan ka dhex abuuro dood ku saabsan arimaha bulshada iyo dhaqanka kuwaasoo eedeymo badan ay u soo jeediyaan umadaha kale. Akhristayaasha bogga ayaa si firfircoon uga qeyb qaatay doodaha iyagoo qaar badan fikrado muhiim ah ku darsaday halka qaarkalena ay kaga faaideysteen in ay jawaabo u helaan su’aalahooda.
Ugu dambentii ayaan isbuucyadii la soo dhaafay waxaan bogga ku soo kordhiyay qeyb ay si toos ah akhristayaasha ugu qori karaan mowduucyada iyo suaalaha ay hayaan. Qeybtaan ayaan idinku dhiiri galinayaa in aad si firfircoon uga qeyb qaadataan si boggu uu u noqdo mid bulshada oo dhan ay qeyb ka qaadato.
Waxaan akhristayaasha bogga sida tooska ah ugu xiran u soo jeedinayaa hambalyo iyo mahadnaq ku aadan taageeradooda joogtada ah.
Hanbalyo Jimcaale howlo badan waad qabatay howlo badanawaa ku sugayaan, waxaan ku leeyahay gogaaga ha noqdo bog horumar u leh inta ku hadasha Af-kaSoomaaliga un adulqaado daldalooladda kaaga yimaada umadda Soomaaliyeed oo u baahan dulqaad badana adiguna mar kale halkaas ka sii wad umadda aad u shaqeysid hanbalyo hanbalyo.
Hanbalyo Jimcaale howlo badan waad qabatay howlo badanawaa ku sugayaan, waxaan ku leeyahay bogga Somaliskana ha noqdo bog horumar u leh inta ku hadasha Af-kaSoomaaliga un adulqaado daldalooladda kaaga yimaada umadda Soomaaliyeed oo u baahan dulqaad badana adiguna mar kale halkaas ka sii wad umadda aad u shaqeysid hanbalyo hanbalyo. Waxaana ka mid ahay dadka aad ugu xirnaa intii aan buufiska qoysaska kala maqan na haysay hadana waan midownay xaaskeyga iyo caruurteyda al/xamdulillaaah. waxaana rajeynayaa inta dhiman ee kalena in illaahay subxaanahu uu la mideeyo reerahooda.
haambalyo walalkas wad naacaawiisay in badan been ala caaye ilah ha ku xaafiido maaliintii ugu yaran shan jeer ayan sogala somaliskacom mahadsanid
waxana idiin sheegaya dadkii labada sano in eey soo fuufudatay oo hada ruuntii iskugu sobiyo shuubatay raajo weyn aya dadku leyahay insha allah
asc hambalyo jimcaale walaal arimaha lasocodkooda ayad noofududeesaye ilaahay amuurahaaga hakuu fududeeyo.
ifka walaal aniga dadka 2da sano ayaan kamid ahaye, arin lagu farxo ayaad shegeysaaye walaal yaad kamaqashay
walal aniga wax xaaqiiqa mahayo laakin dadkii markay wacan waxa lawada yiri wax kasta wa ok ee jawab fiican ayad heelaysan makaxmada waxad sheegaysan ma ogala dad badan ayan laxariiray oo xiita aniga aan ku jiiro weegan guudihisa aya wax kala fuurfurmayan insha allah
asc wallayal wan idin salamay waxan idin waydina qofka swedhan joga e hesta sharciga jinefaha ah hadi ilmaha lo ogolada ma magareshinka ka bixinaya tikitka hadi aysa ka bixinayan inte laga dalbada walalayal wa i mihim iga so jawaba qofki wax ka garanaya ama jimcale i so jawab wall
ifka war fican shegaysaa isha allaah ilahay wax khyr qaba ka rajenaynaa aniga waraqihi waa diray marka ilahay wax khyr qaba ha inaga siyo maxkmada malmo igu soqoreen ina udirsado dacwada marka isha allaah alle amuraheena ha inoga so sahlo
scw walaalayaal waan idin wada salaamay somaliskana waxaan leeyahay hambalyo
walaalyaal xaalada labada sano waxay iila muuqataa in ay dhamaatay oo rajadu wanaagsantahay.
lakiin xalad kalaa soo muuqaneeysa ah cadeeyn mahaysatid oo jinsiyadaadu macada .
DNA xataa kuma fila cadeeynaadu gabbar layiri ayaan arkay oo ciyaal leh
To Wadani, sxb waxaad u direesa dalabkaada imigrationka isaga ayaa ka bixiya tikidka dadka heesta sharciga janeeva . qaabka lo gudbinaaya foormka iyo waxiii kalo shuruud ah kala xiriir red crosska kuugu dhaw , mise kommonkaada isaga wuu ku caawinkaraa qaabka lo diraya dalabka iwm. wcs
stor grattis, grattis jag hoppas utveckligen bättre
tawakal marka sidaa gabdha yaa kuso yiri maxkmadabaa bro bal taa sifican nagu fahfahi
hanad sxb gabadha ciyaal ayaa ujooga meeshaan ninkeedaa ka maqan migrationkaa diidmo siiyay loyar ayeey qabsatay maxkamada ayaa tiri jinsiyada ninkaagu ma cada DNA jinsiyada ninkaaga ma cadeeyn karo markii horana waxaa diidma lagu siiyay 2sano iiyo jinsiyada marka ilaah dhibka ha naga wada qaado faraj kheeyr qabana ha noo furo
tawakal sxb waxan ku weydina gabadha marki wadankan imati mashegen miya mise gadal ayey ka soo gursatey teda kale ilmaha inta mey ku dhashten mise wey latimid sxb isoo fah fahi
tawakal sida rabaan sameyan lakin ilahay uun baa so qaadka leh usaga faraj khyr qaba ka rajenaynaa dhamaanteenba isha allaah alle amuraheena ha inoga sowada sahlo
umu cimraan says:
asc waan salaamayaa dhamaan umadaha muslimiinta gaar ahaan soomaalida.somaliskana waxaan leeyahay sanadguuro wacan.
April 24, 2013 at 12:19
Hambalyo Hambalyo somaliska waxaa shacabka somaliyeed ku qabateen walina aan u haysaan wad ku mahadsan tihiin aniga waxan ma tid ahay aqrista yaashiina webka somaliska aad ayana u jeclahay. Mar labaad Hambalyo jira oo waligiin jooga.
maanta baarlamaanka woo diiday inoo ka dooda arimaha migrationka saas lasocda aqyaarta sharafta leh Beslut: 24 april 2013 Nej till motioner om migration och asylpolitik (SfU7)